बालुवाटार बैठकमा ओलीले भने– ‘देशमा खतरनाक प्रवृत्ति बढिरहेको छ’ (यी हुन् ती १२ प्रवृत्ति)
July 2, 2021 N88LeaveaComment on बालुवाटार बैठकमा ओलीले भने– ‘देशमा खतरनाक प्रवृत्ति बढिरहेको छ’ (यी हुन् ती १२ प्रवृत्ति)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा अहिले केही खतरनाक प्रवृत्ति बढिरहेको दावी गरेका छन् । सरकारी निवास बालुवाटारमा आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको सुरुमा सम्बोधन गर्दै ओलीले उनको विश्लेषण अनुसार १२ वटा प्रवृत्ति देशमा मौलाई रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भनाई अनुसार यी हुन् ती एकदर्जन प्रवृत्ति १– अनुशासन उल्लंघन […]
July 2, 2021 N88LeaveaComment on स्विट्जरल्यान्डलाई हराउँदै स्पेन सेमिफाइनलमा
एजेन्सी । तीन पटकको च्याम्पियन स्पेन १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । रुसमा शुक्रबार राति भएको पहिलो क्वाटरफाइनलमा स्विट्जरल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्पेन अन्तिम चारमा पुगेको हो । सेन्ट पिटर्सवर्ग स्टेडियममा खेलको निर्धारित ९० मिनेटमा र अतिरिक्त समयको खेल १-१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको […]
कुशलकाे बरियतामा सुधार, पछि पारे पन्तदेखि स्मिथसम्मका १३ चर्चित खेलाडी ( हेर्नुस् नेपालका ४ खेलाडीकाे बरियता)
July 2, 2021 N88LeaveaComment on कुशलकाे बरियतामा सुधार, पछि पारे पन्तदेखि स्मिथसम्मका १३ चर्चित खेलाडी ( हेर्नुस् नेपालका ४ खेलाडीकाे बरियता)
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले खेलाडीहरूको नयाँ टी–२० वरियता सार्वजनिक गरेको छ। आईसीसीले अपडेट गरेको टी–२० क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपालका चार खेलाडी परेका छन्। नयाँ वरीयता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरीयता सुधार भएको छ। ब्याटिङ वरीयतामा कुशल ६०औं स्थानमा रहेका छन्। यसअघि उनी ६१ औं स्थानमा थिए। घरेलु भूमिमा भएको त्रिकोणात्मक […]
July 2, 2021 N88LeaveaComment on एमाले ‘२ जेठ’मा फर्किए रहने छैनन् गाेकुल र महेश बस्नेतसहित यी ४६ केन्द्रीय सदस्य (नामावली)
काठमाडाैं । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको माग अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किन सहमत भएमा ४६ जना केन्द्रीय सदस्य नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिरिनेछन्। ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एकीकरण हुँदा एमालेबाट २४१ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट २०० गरी ४४१ जना केन्द्रीय कमिटीमा परेका थिए। एमालेले ४६ जना थपेर २४१ […]
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे भारतसँग ऐतिहासिक सम्झौता ! १२ वर्षदेखिको प्रयासले पायाे सार्थकता
July 2, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे भारतसँग ऐतिहासिक सम्झौता ! १२ वर्षदेखिको प्रयासले पायाे सार्थकता
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसंग ऐतिहासिक सम्झौता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १२ वर्षको प्रयासलाई सार्थकता दिदैं नेपाल–भारत रेलवे सम्झौता संशोधन गराएका हुन् । यसले व्यापार सहजीकरणमा नयाँ फड्को पाउने आशा गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । संशोधित सम्झौतामा दुवै मुलुकले सम्बन्धित अधिकारीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन । रेल […]
July 2, 2021 N88LeaveaComment on सासु ज्वाँईसँग भागिन्, उमेरकाे अन्तर देखेर सारा मानिस दंग
एजेन्सी । प्रेम अन्धो हुन्छ भनिन्छ । एउटै त्यस्तै घटनामा यो भनाई चरितार्थ भएको छ । एक महिला आफुभन्दा आधा उमेर कान्छा ज्वाँईसँग भागेकी छिन् । भनिन्छ सच्चा प्रेममा कुनै धर्म, जाति वा उमेरको सिमा हुँदैन । प्रेम जहिले, जो कसैसँग पनि हुन्छ । सबै बन्धनहरू प्रेमको अगाडि फीका हुन्छन् । यस्तै एक घटना अहिले […]
अब जसपा महन्थ ठाकुरको, उपेन्द्र-बाबुराम समूह आउट, निर्वाचन आयोगमा पुग्यो बलियो प्रमाण,
July 2, 2021 N88LeaveaComment on अब जसपा महन्थ ठाकुरको, उपेन्द्र-बाबुराम समूह आउट, निर्वाचन आयोगमा पुग्यो बलियो प्रमाण,
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिताको विवादमा महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा बलियो प्रमाण बुझाएको छ । अर्थात केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । आधिकारिकताको विषयमा छलफल गर्न ठाकुर पक्षले बुधबार कार्यकारिणी समितिबैठ बोलाएको थियो । बैठकले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा चिठी दर्ता गराएको छ । उक्त चिठीमा ठाकुरसँग निकट मानिएका १८ […]
July 2, 2021 N88LeaveaComment on पार्टी एकताको च्याप्टर क्लोज : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तोकिएको समयभित्रै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकताको च्याप्टर क्लोज हुने चेतावनी दिएका छन् । बालुवाटारमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदलाई छूट नभएकाले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिए एकताको थप प्रयास नगरिने बताएका […]
बालुवाटार बैठकमा बामदेवले के के भने ?
July 2, 2021 N88LeaveaComment on बालुवाटार बैठकमा बामदेवले के के भने ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू पार्टीमा फर्किसकेको बताउँदै अब पार्टी एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धारणा राख्दै उपाध्यक्ष गौतमले आफू आएपछि पार्टी एकताले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । ‘म तपाईंकोमा आइसकेँ, अब फर्किन्न,’ उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गौतमले […]
क-कसले पाउँछन् अर्को साता बेइजिङबाट ल्याइने खोप?
July 2, 2021 N88LeaveaComment on क-कसले पाउँछन् अर्को साता बेइजिङबाट ल्याइने खोप?
काठमाडाैं । आगामी साता नेपालले को रोना वि रू द्धको १० लाख डोज खो प चीनबाट ल्याउँदैछ। उक्त खो प लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज असार २४ गते चीनको बेइजिङ जाँदैछ। खो प लिएर एयरलाइन्सको जहाज भोलिपल्टै नेपाल आइपुग्ने छ। खो प आइपुग्ने भएपछि सो खोप क-कसलाई लगाउने भनेर टुंगो गर्न अहिले खोप शाखा काम गरिरहेको […]